Amagama Emigwaqo yaseThekwini – The Ulwazi Programme
Imigwaqo emikhulu ethekwini seyiqanjwe kabusha ukuze kuhlonishwe amaqhawe azabalazela inkululeko.
U-Aliwal Street uqanjwe kabusha ngoSamora Machel – owayengukhomanda wamasosha ase-Mozambique, umholi wamavukelambuso wezinguquko futhi ekugcineni waba nguMongameli waseMozambique. UMachel wahola izwe lathola inkululeko ngo-1975 waze washona ngo-1986, lapho ibhanoyi lakhe lobumengameli laphaphalaza endaweni enezintaba lapho kuhlangana khona imingcele yeMozambique, Swaziland neNingizimu Afrika.
U-Argyle Street uqanjwe kabusha ngoSandile Thusi – umholi we-ANC waseMlazi nelungu le-MK elibambe iqhaza emikhakheni eyahlukene. Owateleka isiteleka sendlala izinsuku ezingu-32 ngesikhathi eboshiwe. Ubeyinhloko yoPhiko lwezokuXhumana kuMasipala weTheku.
IBerea Road manje oqanjwe ngoKing Dinuzulu – UDinuzulu kaCetshwayo (1868-1913) wayeyinkosi yesizwe samaZulu kusukela ngomhlaka 20 Meyi 1884 waze wakhothama ngo-1913. Walandela ubaba wakhe uCetshwayo, owayeyinkosi yokugcina yamaZulu ukwamukelwa ngokusemthethweni abaseBrithani.
UBooth and Spine Roads baqanjwe ngoHarry Gwala – Njengesishoshovu se-ANC wathunyelwa eRobben Island iminyaka eyisishiyagalombili. Ngemuva kokukhululwa kwakhe ngo-1972 wavinjelwa endaweni yaseMgungundlovu. Uqokwe njengoSihlalo wokuqala we-ANC eNatal Midlands ngemuva kokuvalwa kwenhlangano ngo-1990.
UBrickfield Road uqanjwe kabusha ngoFelix Dlamini – usonhlalakahle ngokomsebenzi futhi oyiMenenja yezabasebenzi. WayenguSihlalo we-ANC esifundeni saseNingizimu yeTheku futhi waba yiMenenja kaMasipala weTheku wokuqala omnyama. Ubuye futhi wasebenza njengelungu lesiShayamthetho sesiFundazwe kusuka ngo-1994 kuya ku-1999.
UCato Manor Street uqanjwe kabusha ngokuthi uMary Thipe Street – uqanjwe ngalowo owayeyiphini likasihlalo we-ANC’s Women’s League. Wayebandakanyeka eCato Manor Beer Hall ngoMashi ngo-1960 lapho abesifazane babejaha khona amadoda ayephuza ubhiya wamabele ngenkathi izingane nabakhosikazi abo elambile.
UDavenport Road iqanjwe kabusha ngoHelen Joseph – isishoshovu saseNingizimu Afrika esasilwa nobandlululo, owazalelwa eSussex, eNgilandi waphothula izifundo zakhe eKing’s College ngo-1927. Ngemuva kokusebenza eNdiya njengothisha iminyaka emithathu, uHelen weza eNingizimu Afrika ngo-1931. Ilungu elingumsunguli we-Congress of Democrats nomunye wabaholi abafunde izigaba ze-Freedom Charter kwi-Congress of the People eKliptown ngo-1955.
U-Edwin Swales Road uqanjwe kabusha ngegama likaSolomon Mahlangu – umphathi wophiko lwe-ANC – uMkhonto weSizwe. NgoMashi 2 1977, uSolomon wagwetshwaisigwebo sntambo ngokulengiswa. Ngo-Ephreli 6 1979, uSolomon Mahlangu eneminyaka engu-23 wabethelwa esigxotsheni kwaba ukufa kwakhe.
U-Field Street uqanjwe kabusha ngegama likaJoe Slovo – uJoe, owazalelwa eLithuania ngo-1926 wathuthela eNingizimu Afrika nabazali bakhe eneminyaka eyisishiyagalolunye. WayenguNobhala-Jikelele weQembu lamaKhomanisi, uNgqongqoshe wokuqala wezeZindlu eNingizimu Afrika omusha kanye noKhomishani wezepolitiki. Ubuye wadlala indima enkulu ekusungulweni kukaHulumeni Wobumbano Lukazwelonke.
UFrancois Road uguqulwa abe nguRick Turner Road – UDokotela Richard Albert Turner wayeyisifundiswa kanye nomfundisi waseNyuvesi yaseNatal eyakhuthaza isizukulwane sezishoshovu ezisencane futhi wasiza ukuvuselela inhlangano yabasebenzi ngaphambi kokubulawa kwakhe ngo-1978.
UFrere Road manje usubizwa ngo-Esther Roberts Road – Indlu ka-Esther Robert yakhiwa ngabazali bakhe ngo-1896 futhi kwakuyindlu yokuqala eFrere Hill eGlenwood. Yabekwa njengesikhumbuzo sikazwelonke ngo- 1980, namuhla igcina iPhansi Museum of African artifacts. UNkosazane Roberts wazalelwa kulendlu futhi washonela kuyo ngo-1980, eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Wayaziwa kakhulu njengomunye wabesifazane bokuqala eNingizimu Afrika futhi wayeyilungu elivelele le-Black Sash Movement.
UGale Street uqanjwe kabusha ngoMagwaza Maphalala – umholi we-COSATU owayelwela amalungelo abasebenzi. Wayephinde abe ngumholi we-KZN Communist Party futhi eyilungu lesiShayamthetho saKwaZulu Natali ngo-1994.
UGardiner Street manje onguDorothy Nyembe Street – UDorothy Nyembe wazalwa ngo-1931 eThalane, eNyakatho neKwaZulu-Natali ngaseDundee. Ngo-1952, wayengomunye wabaholi be-Defiance Campaign yokulwa nayo yonke imithetho ebandlululayo. Kamuva waba yiPhini likaSihlalo wophiko lwabesifazane be-ANC eNatali futhi wasebenza eduze nezingwazi ezinjengoChief Albert Luthuli, Moses Mabhida, Nelson Mandel, Walter Sizulu no-Oliver Tambo.
UJan Smuts Highway uqanjwe kabusha ngokuthi uKing Cetshwayo – wabizwa ngoCetshwayo owaba yinkosi yamaZulu ngo-1872 elandela uMpande.
UKensington Drive uqanjwe kabusha ngo-Adelaide Tambo – owazalwa ngomhlaka 18 Julayi eTop Location, eVereeniging, waba yinkosikazi yokuqala kaMongameli we-ANC u-O R Tambo. Lapho eneminyaka eyishumi nesishiyagalombili wajoyina i-ANC Youth League futhi kamuva waba ngusihlalo okhethiwe wegatsha laseGeorge Gogh.
UKing George V Road manje isiwuMazisi Kunene Road – uKunene (1930-2006) wayeyimbongi eyayihlonishwa eyayihlala KwaZulu-Natal. Ufunda e-University of Natal futhi wawina i-Bantu Literary Competition Award ngo-1956. Waphinde wasebenzela i-ANC eLondon phakathi neminyaka yobandlululo futhi wafundisa izinkondlo zase-Afrika eMelika.
UKwaMashu Highway oqanjwe kabusha ngegama likaCurnick Ndlovu – UNdlovu, owazalelwa eMatatiele ngo-1932, wathuthela endaweni yaseThekwini edumile eMkhumbane nabazali bakhe, ngo-1941 eyofuna umsebenzi. UNdlovu, engumholi weqiniso futhi ongacwasi ngokobuhlanga, walwela izimo ezingcono zokuhlala emajele. Udlale indima esemqoka ekuhlanganiseni iziboshwa zepolitiki eRobben Island. Uphinde waqoqa amaqabane e-Black Consciousness Movement, amanye awo angabaholi abaqavile be-ANC nakuHulumeni namuhla. Usebenze nabanye abaholi be-ANC abaqavile njengoMongameli wangaphambilini u-Chief Albert Luthuli, uDkt Monty Naicker, uDkt Yussuf Sadoo, Moses Kotane, Govan Mbeki noRuth First.
ILeopold Street manje nguDavid Webster Street – uWebster wazalwa ngo-1945 futhi wakhulela ezimayini eCopper Belt yaseNyakatho Rhodesia (eZambia). Wayengusosayensi wezenhlalo eNyuvesi yase-Witwatersrand futhi eyisishoshovu esasilwa nobandlululo esadutshulwa sabulawa ngamasosha ezokuphepha ngaphandle komuzi waso eGoli.
UMansfield Road uqanjwe kabusha ngoSteve Biko – umsunguli we-Black Consciousness Movement. Wazalwa ngomhlaka 18 Disemba 1946 eKing William’s Town, waba ngumholi wabafundi waseNingizimu Afrika owayenethonya elikhulu futhi enamandla kakhulu ngeminyaka yama-1970 futhi wayengumfundi wezomthetho ngesikhathi sokushona kwakhe. Ngo-1972 uSteve Biko wahlukana ne-NUSAS wasungula i-SASO (South African Students Organisation). Ubambe elikhulu iqhaza ekusunguleni i-Black People’s Convention futhi waba ngumholi we-INYO- National Youth Organisation.
IMarine Parade iqanjwe kabusha ngegama lika-Oliver Tambo – ilungu elingumsunguli wophiko lwentsha lwe-ANC. Wazalelwa esigodini saseKantolo, amakhilomitha angama-20 ukusuka eBizana ePondoland, ngomhlaka 27 Okthoba 1917. Waqala inhlangano yabameli abamnyama noNelson Mandela. Wayephinde abe ngu- Commander-in-Chief of Umkhonto weSizwe futhi waba nguMengameli we-ANC isikhathi eside.
U-Old Fort Road manje oqanjwe ngo-K E Masinga – ongumethuli wesiteshi somsakazo sokuqala sesiZulu se-SABC.
U-Ordinance Road manje onguBram Fischer Road – U-Abram Fischer wazalwa ngomhlaka 23 Ephreli 1908 eBloemfontein e-Orange Free State. Ngo-1943 wasiza u-A B Xuma ukuthi abuyekeze uMthethosisekelo we-ANC. Wayephinde abe yilungu le-Congress of Democrats futhi waba yingxenye yethimba lezokuvikela labaholi benhlangano ngesikhathi sokuqulwa kwecala lokuvukela umbuso ngo-1956 kuya ku-1961. NgoSepthemba 1964 uFischer waboshwa wabekwa icala lokuba yilungu leqembu lamaKhomanisi, ngaleso sikhathi inhlangano ingekho emthethweni. Wanikezwa ibheyili kwathi ngoJanuwari 1965 waya ngaphansi komhlaba, waphinde wabanjwa ngoNovemba walowo nyaka. Ngo-1966 watholakala enecala lokwephula umthetho i-Suppression of Communism Act nokwenza itulo lokucekela phansi imikhuba eyaholela ekutheni agwetshwe udilikajele. Ngo-1967 wanikezwa umklomelo we-Lenin Peace Prize.
UPine Street oqanjwe kabusha ngokuthi uMonty Naicker Road – ngemuva kokuthi ilungu le-Natal Indian Congress, bonke noDkt Xuma kanye noDkt Dadoo benza isivumelwano sokusebenzisana, esasaziwa ngokuthi yi-3 Doctors Pact.
UPrince Edward Street oqanjwe kabusha ngoDkt Kassavelo Goonam – Ubengomunye wezishoshovu zesifazane zokuqala zaseNdiya kwi-Natal Indian Congress. Uthole ukuqeqeshelwa ubudokotela e-Edinburgh, eScotland. Ngo-1946 wabamba iqhaza emkhankasweni wokuphikisana nomzabalazo.
URussel Street oqanjwe kabusha ngokuthi uJoseph Nduli Street – ngemuva kokuba yilungu lokuqala le-Luthuli Detachment. Wayephinde abe ukhomanda weMkhonto Wesizwe futhi waba ngumhleli eHhovisi Lesifundazwe le-ANC ngemuva kokuvalwa kwayo. Wabulawa ngesikhathi kudunwa imoto yakhe.
UShepstone Road osubizwa ngoQashana Khuzwayo Road – UKhuzwayo ubenguthisha, umholi womphakathi futhi engumholi wamabhizinisi. Wayengomunye wabahlali ababemelana nokwakhiwa kwe-Bantustans.
USmith Street manje sekungu-Anton Lembede Street – ULembede wazalwa ngomhlaka 21 Mashi 1914 e-Eston, eNatali. WayenguMongameli wokuqala we-African National Congress Youth League futhi eyisifundiswa.
USparks Road uqanjwe kabusha ngoMoses Kotane – Wazalelwa eRustenburg eWestern Transvaal ngo-1905, eqhamuka emndenini wamaKrestu odabuka wabeTswana. Ngo-1928 wajoyina i-ANC kodwa wayithola iyinhlangano edumazayo engasebenzi. Ngawo lowo nyaka wajoyina i-African Bakers ’Union, eyinhlangano ye-Federation of Non-European Trade Unions. Ngo-1929 uKotane wajoyina iqembu lamaKhomanisi kwathi ngo-1931 waba ngumsebenzi ophethe iqembu ngokugcwele. Esebenza bobabili njengeqembu futhi engumgqugquzeli wenyunyana, ubuye wenza uhlelo lokuhlela uhlobo lwe-Umsebenzi, iCommunist Newspaper eyabe ihlelwe ngu-Edward Roux. Njengomunye wabaqashi base-Afrika abathembisa kakhulu i-CPSA, uKotane wanikezwa ithuba lokuya eSoviet Union, futhi unyaka wonke ekuqaleni kwawo-1930 wafunda eLenin School eMoscow.
UWarwick Avenue manje usuyiJulius Nyerere Avenue – uJulius Kambarage Nyerere (13 Ephreli 1922 – 14 Okthoba 1999) wasebenza njengoMongameli wokuqala waseTanzania phambilini eyayaziwa nge-Tanganyika, kusukela ekusungulweni kwezwe ngo-1964 kwaze kwaba uthatha umhlalaphansi ngo-1985.
UWest Street oqanjwe kabusha ngoDkt Pixley KaSeme – oyilungu elingumsunguli we-Natal Native Congress futhi kamuva waba nguMongameli we-ANC.
UWinder Street manje waziwa ngokuthi uDr Langalibalele Dube Street – UDkt John Langalibalele Dube, owazalelwa eNatali ngo-1871 wayengumsunguli wephephandaba Ilanga elisashicilelwa nanamuhla. Waphinda waba nguMengameli we-ANC phambilini.
UWindermere Road manje sekunguLilian Ngoyi Road – uLilian Masediba Ngoyi, “Ma Ngoyi” (1911-1980), wayeyisishoshovu saseNingizimu Afrika sokulwa nobandlululo. Ubengowesifazane wokuqala ukuqokelwa ekomidini eliphezulu le-African National Congress, futhi wasiza ekwethuleni i-Federation of South African Women. Ngemuva konyaka ejoyine i-ANC Women’s League ngo-1952, wakhethwa njengoMengameli wenhlangano. Ngo-Agasti 9 1956 uNgoyi wahola imashi ehamba noHelen Joseph, Albertina Sizulu noSophia Williams-De Bruyn wabesifazane abangu-20 000 beya e-Union Buildings ePitoli bebhikishela uhulumeni wobandlululo owawufuna ukuthi abesifazane baphathe amapasi njengengxenye yemithetho yamapasi.
Akuselona leli kheli-No Longer At This Address
UPeter Machen, encwadini enhle kakhulu eyenzelwe umbukiso e-Durban Art Gallery, ichaza ukuthi kungani ushintsho lwamagama emigwaqo lwenzeka eThekwini, izitaladi zaqanjwa ngmagama obani nokuthi bangobani abantu okuqanjwe ngabo amagama emimgwaqo emisha.